Iindaba -Emva kwenani lescreen sokuboniswa kweselfowuni, uyakuthi uphumelele phi umboniso weselfowuni
Ubungakanani buhlala bungumgaqo obalulekileyo kuphuhliso lwescreen sefowuni, kodwa iselfowuni ene-intshi engaphezulu kwe-6.5 ayilungelanga ukubamba isandla esinye. Ke ngoko, akukho nzima ukuqhubeka nokwandisa ubungakanani bescreen, kodwa uninzi lweempawu zeefowuni eziphathwayo ziyekile umzamo onjalo. Uyenza njani inqaku kwiscreen esilinganayo? Ke ngoko, kuyeyona nto iphambili ekunyuseni inani lezikrini.
Kuya kuphumelela phi kwiscreen sefowuni esiphathwayo emva kwenani lezikrini
Umxholo wesabelo sesikrini awukho mtsha. Iimpawu ezininzi bezisoloko zibalisa amabali malunga noku ukusukela kwiminyaka embalwa yokuqala xa iifowuni ze-smart zaqala ukuvela. Nangona kunjalo, ngelo xesha, umda wescreen wawungaphezulu kwe-60% kuphela, kodwa ngoku ukuvela kwescreen esibanzi kwenza ukuba inani lescreen sefowuni esiphathwayo lidlule kwi-90%. Ukuphucula inani lescreen, uyilo lwekhamera yokuphakamisa lubonakala kwimarike. Ngokucacileyo, inani lescreen liyeyona nto iphambili ekusetyenzisweni kwescreen esiphathwayo kule minyaka mibini idlulileyo.
Iifowuni ezipheleleyo ezikwiselfowuni ziya zithandwa, kodwa kukho imida ekuphuculeni umlinganiso wezikrini
Nangona kunjalo, indawo yokuthambisa yokuphucula inani lezikrini icacile. Ziza kukhula njani izikrini ezihambahambayo kwixa elizayo? Ukuba siqwalasele ukuqaphela, siyakufumanisa ukuba indlela yesisombululo sele igqunywe ngameva ixesha elide. 2K isikrini sefowuni esiphathwayo sanele, kwaye akukho siphumo sibonakalayo kubungakanani bee-intshi ze-6.5 ngesisombululo se-4K. Akukho gumbi lokuqhubela phambili kubungakanani, isisombululo kunye nokwabelana kwescreen. Ngaba mnye kuphela umjelo wombala oseleyo?
Umbhali ucinga ukuba ikamva lefowuni yeselfowuni liya kutshintsha ikakhulu ukusuka kwimiba emibini yezinto kunye nolwakhiwo. Asizukuthetha ngescreen esigcweleyo. Le yinto eqhelekileyo. Kwixesha elizayo, zonke inqanaba lokungena kweefowuni ziya kufakelwa isikrini esigcweleyo. Makhe sithethe ngeendlela ezintsha.
I-OLED ye-PK qled izinto eziba yindlela yokuphucula
Ngophuhliso oluqhubekayo lwesikrini se-OLED, ukusetyenziswa kwescreen se-OLED kwifowuni ephathekayo kuye kwayinto eqhelekileyo. Ngapha koko, izikrini ze-OLED ziye zavela kwiifowuni eziphathwayo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Abantu abaqhelene ne-HTC kufuneka bakhumbule ukuba i-HTC enye isebenzisa izikrini ze-OLED, kwaye i-Samsung ineefowuni ezininzi ezisebenzisa izikrini ze-OLED. Nangona kunjalo, isikrini se-OLED sasingekavuthwa ngelo xesha, kwaye ukuboniswa kombala kwakungagqibekanga, okusoloko kunika abantu imvakalelo "yokwenza okunzima". Ngapha koko, kungenxa yokuba ubomi bezinto ze-OLED bohlukile, kwaye ubomi bezinto ze-OLED ezinemibala eyahlukileyo eyahlukileyo bohlukile, ke umlinganiso wezinto ze-OLED ezihlala ixesha elifutshane ungaphezulu, ke ukusebenza kombala ngokubanzi kuyachaphazeleka.
Iifowuni ze-HTC enye sele zisebenzisa izikrini ze-OLED
Ngoku yahlukile. Izikrini ze-OLED ziyakhula kwaye iindleko ziyawa. Ukusuka kwimeko yangoku, kunye neapile kunye nazo zonke iintlobo zeefowuni eziphambili kwifowuni ye-OLED, uphuhliso lweshishini le-OLED sele luza kukhawulezisa. Kwixesha elizayo, isikrini se-OLED siza kwenza inkqubela phambili enkulu ngokwempembelelo kunye neendleko. Kwixesha elizayo, ngumkhwa oqhelekileyo weefowuni eziphathwayo eziphezulu zokutshintsha izikrini ze-OLED.
Okwangoku, inani leefowuni zesikrini se-OLED liyanda
Ukongeza kwiscreen se-OLED, kukho isikrini esibhaliweyo. Ezi ndidi zimbini zezikrini zizinto ezizenzekelayo, kodwa ukuqaqamba kwesikrini se-qled kuphezulu, okunokwenza ukuba umfanekiso ubonakale ubonakale. Ngaphantsi kokusebenza kombala ofanayo, i-qled screen inefuthe "lokutsala amehlo".
Ukuthetha ngokwentetho, uphando kunye nophuhliso lwesikrini se-qled lusemva ngoku. Nangona zikhona ii-TV ze-qled kwintengiso, itekhnoloji esebenzisa izinto ezi-qled ukwenza iimodyuli ezikhanyayo kunye nokwenza inkqubo entsha yokukhanyisela ngombala we-LED ohlaza okwesibhakabhaka, ongesiso isikrini seqled sokwenyani. Uninzi lwabantu alucaci ncam ngale nto. Okwangoku, uninzi lweempawu ziqalisile ukunikela ingqalelo kuphando kunye nophuhliso lwe-qled yangempela. Umbhali uqikelela ukuba olu hlobo lwesikrini kunokwenzeka ukuba lusetyenziswe kwiscreen esiphathwayo.
Umkhombandlela wokugqibela wesicelo sokugoba kufuneka uqinisekiswe
Ngoku makhe sithethe ngokwakhiwa. Kutshanje, umongameli weSamsung ubhengeze ukuba iselfowuni yakhe yokuqala esongekayo iya kukhutshwa ukuphela konyaka. U-Yu Chengdong, u-CEO kwishishini labathengi likaHuawei, ukwathe ukusonga ifowuni ephathwayo bekukucwangciso lukaHuawei, ngokwe-Welt magazine yaseJamani. Ngaba ukusonga kwicala elizayo lokuphuhliswa kwescreen seselfowuni?
Nokuba imilo yokusonga ifowuni ephathekayo iyathandwa kusafuneka iqinisekisiwe
Izikrini ze-OLED ziyaguquguquka. Nangona kunjalo, itekhnoloji ye-substrate eguqukayo ayikakhuli. Izikrini ze-OLED esizibonayo ikakhulu zizicelo ezisicaba. Ifowuni esongelayo yeselfowuni ifuna isikrini esiguquguqukayo, esiphucula kakhulu ubunzima bokuvelisa isikrini. Nangona ezo zikrini zifumaneka ngoku, akukho siqinisekiso sokubonelela ngokwaneleyo.
Ndilindele ukuba ukusonga iifowuni eziphathwayo akuyi kuba yinto ephambili
Kodwa isikrini semveli seLCD asinakho ukufikelela kwiscreen esiguqukayo, kuphela kwisiphumo somgangatho ogoso. Uninzi lwee-E-ezemidlalo zibonisa uyilo olugobile, enyanisweni, zisebenzisa isikrini seLCD. Kodwa iifowuni ezigobileyo zingqineke zingakulungelanga ukuthengisa. Isamsung kunye ne-LG bazise iifowuni ezigobileyo zesikrini, kodwa impendulo yentengiso ayikho nkulu. Sebenzisa isikrini seLCD ukwenza ukusonga kweefowuni eziphathwayo kufuneka kubekhona nemisonto, eya kuthi ichaphazele kakhulu amava abathengi.
Umbhali ucinga ukuba ukusongelwa kwefowuni ephathekayo kusadinga isikrini se-OLED, kodwa nangona ukusonga iselfowuni kuvakala kupholile, kunokuba kuphela endaweni yeselfowuni. Ngenxa yeendleko zayo eziphezulu, iimeko zesicelo esingacacanga, kunye nobunzima kwimveliso yemveliso, ayizukuba yinto ephambili njengescreen esipheleleyo.
Ngapha koko, umbono wesikrini esibanzi iseyindlela yesiqhelo. Umongo wenxalenye yescreen kukuzama ukuphucula isiphumo sendawo ethile xa ubungakanani befowuni ephathekayo bungenakuqhubeka nokwanda. Ngokuthandwa okuqhubekayo kweemveliso zesikrini esigcweleyo, isikrini esigcweleyo asizukuba yindawo enomdla kungekudala, kuba iimveliso ezininzi zenqanaba lokungena nazo ziqala ukumisela uyilo olupheleleyo lwescreen. Ke ngoko, kwixa elizayo, izinto kunye nokwakhiwa kwescreen kufuneka kutshintshwe ukuze kuqhubeke ukuvumela iscreen sefowuni esiphathwayo sibe nezinto ezintsha eziqaqambileyo. Ukongeza, zininzi iitekhnoloji ezinokunceda iifowuni eziphathwayo ukuba zandise isibonisi, ezinje ngetekhnoloji yokuqikelela, itekhnoloji ye-3D ye-eye, njl. ungabi lolona luhamba phambili kwixesha elizayo.